Toni Kroos: “Ma Awoodid Inaad Iibsato Champions League” – Gool FM
Toni Kroos: “Ma Awoodid Inaad Iibsato Champions League”
Dajiye April 24, 2018
(Champions League) 24 Abriil 2018 Xidiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Bayern Munich ee tartanka Champions League.
“Waxaan rajeynayaa koox adag, kani waa kulanka afar dhamaadka ee Champions League, Bayern waxay qaadaneysaa qaab ciyaareed fiican, mana jiro hadal intaa ka badan”.
Kroos oo ka hadlayay farqiga Bayern Munich ee xili ciyaareedkii hore iyo xili ciyaareedkan u dhexeeya ayaa sheegay kahor ciyaarta lagu balansan yahay inay ka dhaco Allianz Arena wuxuuna sheegay inuu jiro farqi aad u xoogan ee dhanka kooxda reer Germany ah.
“Waxay ila tahay inay qaadanayaan waqti aad u wanaagsan, Waxay lumiyeen ciyaartoy muhim ah sida Levandowski, waxaan dareemayaa inay qaab ciyaareed fiican ku jiraan, la shaqeynta Jupp Heynckes waxay u ciyaarayaan si ka wanaagsan sidii hore”.
“Ma iibsan kartid koobka Champions League sababtoo ah haddii sidaas la sameyn lahaa, kuma aan guuleysan lahayn koob, mana bixino lacago fara badan”.
RASMI: Garsooraha Dhex dhexaadin Doona Finalka FA Cup-ka Manchester United iyo Chelsea oo lagu Dhawaaqay
20-ka Laacib ee ugu Mushaarka badan kubadda cagta Adduunka xilli ciyaareedkan oo la shaaciyey… + SAWIRRO